Fa maninona Paleo no ratsy aminao? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Vokany Paleo - Boky Torolàlana feno
Vokany Paleo - Boky Torolàlana feno
Fa maninona Paleo no ratsy aminao?
Ilay mahazatrapaleoNy fihinanana sakafo kosa dia mametraka ny loza mety hitranga indrindra amin'ny tsy fahampiana amin'ny kalsioma sy vitamina D, izay manakiana ny fahasalaman'ny taolana. Mandritra izany fotoana izany, ny tavy sy ny proteinina mahasalama dia azo lanina mihoatra ny ambaratonga naroso, hampitombo ny mety ho aretin'ny voa sy ny fo ary ny homamiadana sasany.10 Jona. 2015
Amin'ireo sakafo lamaody rehetra tonga tato anatin'ny taona maro, ny sakafo manta sy ny paleodite no mety ho dondrona indrindra. Aza atomboka amin'ny keto aho fa hiverina amin'ilay antsoiko hoe sakafo manta sy paleo no maditra satria mifototra amin'ny hevitra mampiahiahy momba ny fomba fiasan'ny vatantsika sy ny fivoaran'ny fiasan'izy ireo, andao atomboka amin'ny izany sakafo manta izany. Azo antoka fa afaka miaina fiainana salama lava ianao amin'ny fihinanana karazan-tsakafo rehetra sy ny sakafo mety hanakana ny gliosida voadio sy ny sakafo voahodina hafa dia mety ho tsara ho an'ny olona toa ahy izay manana fiainana be loatra izay mety aminao. Aza milaza amin'olona na iza na iza izany Ny sakafo ara-tsakafo dia voajanahary kokoa satria isika olombelona dia nahandro ny sakafontsika hatramin'ny faha-Homo sapiens antsika, raha ny marina, ny fandrahoana sakafo dia mety ho anisan'ny antony mahatonga antsika Homo sapiens, izay vao nolazaiko dia eo amin'ny saha fantatra amin'ny anthropology fantatra amin'ny hoe Cooking Hypothesis, ary na dia mety tsy hitovy be loatra amin'ny fomba fiainantsika razambentsika Paleolithic aza ny antony mahatonga ny mahandro sakafo hahasoa azy ireo dia mbola mitohy ho antsika mpahay siansa mino fa ny razambe olombelona Homo erectus dia tokony ho roa tapitrisa sy sasany lasa izay Nanomboka nihinana hena taona lasa izay .
Namorona fandrahoana sakafo tokony ho iray tapitrisa taona lasa izay ny Cooking dia lasa fanao be dia be sahabo ho 250000 taona lasa izay ary izany dia tamin'ny fotoana nisehoan'ny olombelona maoderina anatomika voalohany - ny Homo sapiens voalohany, izay hetsika mifampitohy avokoa, na toy izany koa ny fomban-kevitra milaza fa raha vao nanomboka nahandro dia afaka nahazo angovo bebe kokoa izahay ary tena manampy anay amin'ny maha-olombelona izay takatsika ankehitriny toy izao. Jessica Ham, Profesora ao amin'ny Antropolojika ao amin'ny Emory University Oxford College, rehefa nifindra tamin'ny sakafo manta ho any amin'ny sakafo izay ampahany amin'ny sakafon'ny hena isika ary ampahany amin'ny sakafo ny sakafo Cookina dia nahazo tanjaka bebe kokoa izahay. Ny tsinay dia mihena sy mamolavola ny haben'ny nify miova ihany koa satria tsy fantatray fa tsy maintsy kosehinao amin'ny zavatra manta izany.
Ampitahao amin'ny katorin'ity buffalo ity na osy io Ny rafitra fandevonan-kanina anao dia kely kokoa noho ny oharina amin'ny vatanao. Ity osy ity dia mila fitaovana anatiny lehibe handraisana ny sakafo maintso azon'ny vatany ampiasaina tsy mitovy amin'i Gaudí Tsy mila mandany ara-bakiteny ny tontolo andro miaraka aminy mandany ny mitsako ny ruminants ary ny fitaovan'ny vatako dia tsy mila ampihimamba amin'ny asa tsy tapaka famakiana azy. Ny fandrahoan-tsakafo dia ahafahantsika mihinana sakafo manankarena mahavelona bebe kokoa ary mandevona mialoha azy ireo ivelan'ny vatantsika mba handravana azy ireo ao anaty vilany mba tsy hiasa intsony ny vatantsika raha vao mihinana isika, araka ny filazan'ilay hipotera sis, tena mahery vaika ity fanavaozana ity. fa namela ny anatomia antsika hivoatra amin'ny fomba rehetra izay nanovana ireo fiovana biolojika ireo avy eo dia nanatanjaka ny ati-doha sy ny antsika Manitatra fahaiza-manao na fahaizan'ny ati-doha. Ny habetsaky ny vatana sy ny fotoana natokana ho an'ny fandevonan-kanina dia midika bebe kokoa ho an'ny hetsika hafa toy ny famolavolana ziggurat na fomba vaovao sy mampihorohoro amin'ny fifamonoana. Ireo endrika rehetra ananan'ny sivilizasiona izay nahafahanay nahandro dia namela anay hanorina rehefa miala amin'ny ara-batana izahay antropolojika mankany amin'ny antropolojika ara-kolotsaina, misy ny adihevitra iray hafa tanteraka izay milaza fa ny fandrahoan-tsakafo dia ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mahazo bebe kokoa amin'ny sakafom-piavian'izy ireo mahazatra, manafaka ny mpikambana sasany ao amin'io fiarahamonina io ho lasa mpanao mari-trano sy miaramila ary mpanao vato sy pretra ary mpandrafitra fa tsy mpamboly fotsiny ny tsirairay. .
Ham tenany dia antropolojian'ny kolontsaina, ary na dia tsy mino aza izy fa ny fandrahoan-tsakafo dia nitana andraikitra mivantana tamin'ny fivoarantsika ara-batana, dia resy lahatra tanteraka izy fa lehibe tokoa izany tamin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina. Ny fandrahoan-tsakafo dia fiasa ara-tsosialy iray, noho izany fantatrao fa hatraiza no tokony hieritreretantsika koa ny fomba nahitana ny nosovcooking ara-tsosialy tao anatin'ny fanampiana antsika ho tonga olombelona ary manampy antsika hiasa miaraka amin'ny fahaizana voajanahary mba hiara-hiasa sy hifaneraserana, hitanareo ny kolontsaina manodidina izao tontolo izao amin'ny tontolo sy amin'ny kolontsaina rehetra dia mahandro ny sakafony izy ireo ary misy kolontsaina maro izay azoko nolazaina fa ny kolontsaina sakafo any Amerika Avaratra ankehitriny dia iray amin'izy ireo izay amin'ny kolontsaina maro no ahitanao ny fitambaran'ny sakafo masaka sy manta, ny sakafo manta dia tsy Thing, ohatra, rehefa manao fikarohana eny an-tsaha any Ghana aho dia tsy hieritreritra hoe efa nihinana sakafo ianao, raha mihinana izany, raha mihinana sakafo manta dia heverina ho masaka ho an'ity fotoana ity. Na aiza na aiza no ahitako ny salady dia nandeha mangingina tany an-tsena aho mba hividy legioma ary avy eo niafina tao amin'ny efitranoko ary nihinana irery ny letisia satria fantatro fa hoesoesoana izy ireo fa sarotra ny hikarakara an'i Dr. um, miafina izy ireo fanondranana an-tsokosoko ny letisia, saingy mety ho lasa zavatra ny vahoaka Ghaneana satria ny fandrahoan-tsakafo dia misy tombontsoa ara-tsakafo izay mbola misy ifandraisany indrindra amin'ny olona velona ankehitriny, ary hiresaka momba izany isika aorian'ny fanohananako ity horonantsary Misaotra anao ity, tsy avela amin'ny kafe ny manta na sakafo paleo, izay amiko dia misy antony ampy hiantsoana azy ireo ho dondrona.
Ny fifanakalozana dia fomba iray ahazoana kafe vaovao sy manaitaitra voafantina arakaraka ny tsirinao ary alefa mivantana any am-baravarana hoentina. Raiso ny kapoakanao maraina isan'andro nefa aza mankany amin'ny fivarotana na cafe, ny zavatra voalohany ataonao dia mandeha misotroa, miaraha mivarotra mangina ary ento ny fanadinanao raha kafe tampoka ianao raha toa ka noob dia hoheveriko fa tanora aho amin'izao andro izao dia lazainao azy ireo ny fomba anaovanao ny kafe izay tena misy fiantraikany amin'ny karazana mety aminao indrindra nefa betsaka amin'ireo fanontaniana ireo raha tsy manana hevitra sta rken tsara ianao dia azonao atao ny milaza hoe gaga aho fa tiako ny varotra varietal misafidy ho anao izay miseho eo ivelan'ny doorthi anao izay tena manandrana toy ny serizy sy lavanila avy eo mandehana an-tserasera ary omeo isa nandefa anao izy ireo ary ny algorithm ny kafe manokana anao dia hihamahay sy hanan-tsaina ihany. Mandefa anao hatrany ny kafe tianao ny 100 voalohany aminao izay manindry ny rohy etsy ambany dia hahazo fihenam-bidy 30% amin'ny kitapo voalohany rehefa misoratra anarana fandefasana maimaim-poana ao anatin'izany ny fihenam-bidy 30% amin'ny kitapo fisotroanao kafe ara-barotra voalohany, misaotra ny varotra ary ny fanaovana kafe dia ohatra iray amin'ny herin'ny rano mangotraka ao anaty rano, indrindra ny fahatongavan'ireo zavatra toy ny lovia vato sy ny fiarovana ny rano taty aoriana, dia tena namela ny olona Mba hahazoana sakafo bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fandrahoan-tsakafo azy amin'ny fiheverana tantaram-pitiavana antsika, ny zokiolona dia manendasa hena amin'ny stick amin'ny alàlan'ny lelafo misokatra, saingy miaraka amina biby masiaka dia mahavariana ny hakanao kely miala amin'ny taolana amin'ity lalana ity, fa afaka mahandro ihany potipotehina anaty rano mandritra ny ora vitsivitsy ary izay rehetra latsaka ara-bakiteny ao amin'ny taolana miampy proteinina sy taonina hafa very miaraka amin'ny fandrahoan-tsakafo dia very ao anaty ron-kena azonao sotroina ary eto no hitenenan'ireo mpiaro ny sakafo manta iray, hey fa andraso iray minitra ny fandrahoana sakafo dia manimba zavatra mahavelona sasany, marina izany, very ny isaky ny mahasalama rehefa mahandro sakafo, nefa ny fatiantoka dia kely dia kely, fa ny tombony azo avy amin'ny fandrahoana sakafo dia mihoatra lavitra noho ny fatiantoka Dr. Tim Crowe dia Mpaninana sakafo efa ela ary mpampiantrano ny Thinking Nutrition Podcast ary ny aretina manerantany Izao tombo-tsoa farany izao dia mety ho ampahany amin'ny antony maha-zava-dehibe ny fandrahoan-tsakafo any Ghana sy any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana hafa izay tsy dia mitera-bidy loatra ny sakafo sy ny rano fa tompoko fa manana fiarovana ara-tsakafo manokana isika. ny olana eto amin'ny fanjakana amerikanina na dia voalohany aza dr. Nilaza i Crowe fa misy bioavailability, satria fotsiny hoe mihinana sakafo esophagus ianao dia tsy midika hoe afaka mampiasa azy io ny vatanao.
Ka rehefa mahandro sakafo ianao dia misy zavatra mahavelona azonao alaina kely, nefa mandray bebe kokoa amin'ny hafa, ka raharaha fiovana sy fihodinana, ary hataoko ohatra tsara izy, misy vitamina, iray Avy amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana vitamina A antsoina hoe lycopene. Avitamin izy io. Manome loko ny lokony izy io, indrindra ny voatabia. Mahazo bebe kokoa an'io otrikaina A io ao amin'ny lalan-dranao ianao, izay misy lycopene be rehefa mahamasaka voatabia ianao. ohatra tsara ohatra iray hafa amin'ny legume Tsy azo atao mihitsy ny mandevona tsaramaso sy voanio ary ny toy izany raha tsy mahandro azy ireo aloha.
Ankehitriny dia misy olona sasany izay milaza fa tian'izy ireo tokoa ny sakafon'ny sakafo manta noho ny fihenan'ny bioavailaka tsy hamakianao ny rindrin'ny sela, mahaliana ny fiarahan'ny mpiara-miombon'antoka fa eny ny mety ho kaloria amin'ireo sakafo sasany izay tsy dia atokisanao rehetra. ary Folks maro dia maro, rehefa mandeha amin'ny sakafo sakafo manta aho izay mety hampihena ny lanjany amin'ny laharana voalohany satria manenjana ny safidiny ara-tsakafo dia mijanona tsy mihinana sakafo junk be loatra izy ireo ary angamba tokony handraoka kaloria vitsivitsy vitsy kokoa, izay zavatra tsara any amin'ny tontolo andrefana dia, fa avia, azafady, aza manaraka drafitra fihinanana sakafo izay miankina amin'ny fanadinoana tsotra fotsiny ny sakafo tsara nefa tsy mampiasa azy akory. Hadalana fotsiny izany amin'ny diet paleo vendrana ny sakafo izay manary voa sy legume ary vokatra vita amin'ny ronono noho ny fiheverana fa ireo sakafo ireo dia tsy lanin'ny razamben'i Stone Age, tsy tokony hihinana azy ireo isika, hoy ireto olona ireto, fa misy porofo arkeolojika ity izay ny olona, ​​ohatra, mihinana voam-bary lalina amin'ny Paleolithic, ela be talohan'ny revolisiona voalohany momba ny fambolena ary mazava ho azy fa maro amin'ireo legioma izay diso an'i Paleodiet no tsy nisy tamin'ny vanim-potoana vato. Izy ireo dia zavaboary maoderina vokatry ny fitomboana nifantina an'arivony an'arivony taona maro an'i Hum indray avy amin'ny maha dr.
Nilaza i Crow fa tsy azo lavina fa ny olona miaina anaty fiarahamonina manankarena dia mihinana kaloria be loatra amin'ny zavatra toy ny gliosida voadio am-polony taona maro hifehy ny fiparitahan'ny epileptika amin'ny zaza mihinana glucose izay tsy zakan'ny ati-dohanao fa tsy siramamy mihinana Mally ary ity siansa ity dia manampy amin'ny fisorohana ny aretim-po sy ny olona izao dia nandray an'i Onketo ho fihinanana sakafo lanja. Ny olana dia vitsy ny olona mihevitra fa manao keto izy ireo raha ny marina mihinana ny tavy matavy amin'ny gliosida ilaina mba hampidirana ny vatanao amin'ny saka keto tena izy izay dimy taona no mampiasa Epilepsy no novolavolaina. Ireto ankizy mahantra ireto dia tsy maintsy manana crème whompement mavesatra isaky ny misakafo ary raha tsy hoe ahazoanao sidina aho, indrindra miaraka amin'ny atleta ambony iray izay tena nifantoka tamin'ny fisakafoanana tamin'izany fomba izany, manana toetra mampientanentana be loatra isika, saingy vitsy ny olona mifikitra amin'ny tena izy. sakafo ketôgônika mandritra ny telo ka hatramin'ny enim-bolana mahery ary izany dia ny hahazoana incetosis izay manana gliosida manodidina ny 50 grama isan'andro ary tsy gliosida be izany.
Dr. Crowe dia iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny sakafo efa zato efa noresahiko tamin'ity fotoana ity tamin'ny fiainako izay samy milaza fa tsy mitovy ny fahitana azy, ny olana amin'ny sakafonao dia mety tsy ny mofo hanendasinao ao an-trano na ny paty vaovao izay manendasa ao an-trano ianao, izay ataonao ao an-trano fa ny sakafo voahodina dia ny fatiantoka mamy izay ividiananao ireo burger fast food sy fries, ka izay drafitry ny sakafo manala ny ankamaroany amin'ny sakafonao dia mety hahatonga anao ho tontolo tsara ary ity ihany no lamaody tokony ho fantatrao momba ny kafe dia tsara koa, misaotra anao indray tamin'ny fanohananao ity lahatsoratra ity. Ity rohy ity ho an'ireo zato voalohany hahazo 30% ny kitaponao voalohany dia ao amin'ilay famaritana
Inona avy ireo voka-dratsin'ny fihinanana paleo?
Voka-dratsySYTombony amin'ny sakafo Paleo
Mety ho lafo izany.
Tsy manao izany ianaomihinanany varimbazaha na ny ronono rehetra izay mety hahasoa ny fahasalamana sy angovo.
izanylevitramety ho sarotra ho an'ny mpihinan-kena, indrindra fa tsy manisy tsaramaso.
Ny ankamaroan'ny atleta dia mila karbaona 3 ka hatramin'ny 6 grama isaky ny pounds ny lanjan'ny vatany, isan'andro.
Fantatrao izaho sy i Paleo, manana tantara mahafinaritra izahay Hi izaho Tracy Lockwood Beckerman dia mpahay sakafo voasoratra anarana any New York City aho ary anjarako ny manampy anao hamantatra izay hohanina ary maninona isika izao no hiverina ara-potoana any amin'ireo mpanafika lava-bato ary ny dudette, ireo mpihaza mpihaza izay maniry hilentika lalina amin'ny sakafo Paleo, mety efa naheno an'io sakafo io ianao, saingy anio dia hanazava ny zavatra aterak'izany aho ary inona no tokony ho eritreretin'ny lafy sy lafy alohan'ny hanombohanao, na dia ity karazan-tsakafo ity dia niverina am-polony taona maro ny sakafo paleo nohanin'ilay dokotera Stanley Boyd nihinana tamin'ny 1985, namboarina mba hitoviana amin'izay nohanin'ireo razambentsika mpihaza mpihinana an'arivony taona maro lasa izay nandritra ny Paleolithic, niadiana hevitra fa ny vatantsika dia tsy namboarina handevona sakafo novokarin'ny fomba fambolena maoderina, ka ny paleo dia momba ny fihinanana sakafo manontolo sy ny fisorohana ny sakafo voahodina, izay midika fa hofongaranao alikaola sy legioma vita amin'ny ronono siramamy sy legioma avokoa ny fandinihana rehetra nolazaiko fa vita tao amin'ny fotoana fohy ary noho izany ny vokany maharitra Paleo tsy fantatra. Ity no fantatsika momba ny tombontsoa azo avy amin'ny sakafo. Heveriko fa ny mpiara-miasa amiko rehetra any Artie dia afaka mihemotra dia manapaka ny sakafo voahodina. Fantatsika fa ny sakafo fonosina matetika dia mitondra siramamy sy additives izay tsy dia tsara ho an'ny vatantsika, hoy ny fanadihadiana nataon'ny Harvard School of Public study Public Health fa manodidina ny telo ampahefatry ny salanisan'ny sotasota amerikana amerikana dia avy amin'ny sakafo voaomana ara-barotra, ary ny Sakafo sy ny Fahasalamana amin'izao fotoana izao ny mamaivay tsara, satria ny fisorohana ny sakafo misy alikaola siramamy sy gluten dia mety hampihena ny fivontosan'ny vatana, izay mety hanampy amin'izany Amin'ny ankapobeny, mba manala ny soritr'aretin'ny aretina mitaiza, raha manaraka ny sakafo misy proteinina mahia sy sakafo zavamaniry ianao dia hahatsapa ho lava kokoa, izay manampy amin'ny fifehezana l Ny fampiakarana ny haavon'ny siramamy ao anaty dia tsara hitazonana ny haavon'ny angovo eto amintsika sy ny hormonina miady saina ao Sch oh hitazona.
Ny sainam-pirenena mena lehibe avy any Rd dia ny hoe ity sakafo ity dia mety handavaka lavaka ara-tsakafo ao anaty sakafo raha tsy mety izany. Ny fihinanan-tsakafo voafetra na tsy misy dia afaka mampihena ny haavon'ny vitamina B toy ny niacin folate ary koa ny manezioma sy ny fibre ny otrikaina rehetra tadiavin'ny vatanao ary mila miasa tsara. Ny fikajiana ireo vondrona sakafo manan-danja toy ny vokatra vita amin'ny ronono dia mety hiteraka tsy fahampian'ny otrikaina toy ny kalsioma, vitamina D. ary mitazona diary malala fosforus izay tiako holazaina dia hoe Gary, te-hanao ahy Suisse ve ianao rehefa tsy ao amin'ny keto aho ary holazaiko fa ny sakafo izay manala ny vondron-tsakafo iray manontolo dia miteraka ahiahy lehibe satria tsy misy izany. porofo lehibe hanohanana ny fanilihana ireo legume vita amin'ny ronono sy serealy avy amin'ny sakafon'ny mpanjifa antonony dia naseho mba hampitombo ny risika amin'ny aretim-po.
Manoro hevitra foana aho ny hampihena ny sakafo matavy be rehefa resaka sakafo eny am-pandehanana, manaova soa ho an'ny tenanao ary aza mandeha misakafo nefa tsy manomana mialoha ary manaova fikarohana amin'izao fotoana izao hahitanao toro-hevitra vitsivitsy momba ny fomba fiasan'ny Paleo ho anao. Mifantoha amin'ny legioma maintso ravina ho an'ny kalsioma toy ny pak choy chard sy epinara misy loharanom-proteinina toy ny hazelnuts sy voa hemp hampihena ny fifantohana amiko. Betsaka ny menaka azo hanina any ka mety hisavoritaka amin'ny fampiasana menaka oliva ary mety hialana ireo Mampiasa Tonony voaniho iray taonina, izay misy tavy matavy be, aza manadio ny voankazo toy ny hoe hanary anao any ivelany, na dia tsy ny zava-boahary aza no ifantohan'ny sakafo Paleo, tokony mbola hihinana voankazo iray na roa a ianao a Andro ny sakafo hanina mba hahazoana fanampiana mahavelona sy otrikaina fanampiny, na dia voafetra aza ny paleo. Mora ny manara-maso satria ny sakafo manontolo ihany no tadiavinao, saingy mety ho sarotra izany rehefa misakafo rehefa mandeha. ny safidiko voalohany dia ny maka paoma taloha tsotra fotsiny.
Azonao atao ihany koa ny mijery ireo sakafo maivana paleo efa voafono raha Pookitching ianao dia ao anaty Pinch jereo ao an-dakozia tany am-boalohany ary Lesserevil dia safidy tsara, fa fampahatsiahivana am-pirahalahiana, satria fotsiny satria paleo dia tsy midika hoe mahazo solaitra ianao isaky ny ny alina dia tokony hamafa sôkôla matsiro. Ny fanesorana ny ronono sy ny voamaina dia mety hampatahotra, fa ny fanandramana mamorona zavamaniry sy voanjo, manandrama sambo voatavo miaraka amin'ny fromazy amandy sy kofehy zucchini aka zoodles miaraka amin'ny alfredo cashew velvety hamenoana izany banga izany, fantaro ny rononoo, aza atao Milk With An Ronono maso miaraka amin'ny antony mahamety izany safidy tsy misy ronono izany dia ho sakaizanao akaiky indrindra amin'ny sakafo Paleo, na ronono akondro vita amin'ny ronono na ronono voanio dia tena zava-misy amin'ny famokarana ny sakafonao mandritra ny hazavana henjana tena henjana indrindra manongilan-tsofina ny kalitao hena, fanerena be loatra hihinana sakafo biolojika sy ahitra hatrany noho ny kitapom-bolanao satria hikarakara ny vatanao foana ianao raha manomboka tsy salama, manaova fanitsiana vitsivitsy amin'ny The downside dia manatsara ny adin-tsainao sy ny angovo azonao toy ny kalitaon'ny torimaso fa tsy mifantoka amin'ny fihenan'ny lanja koa mifantoka amin'ny toe-pahasalamana sasany izay mety voakasik'ity sakafo ity. Zahao tsy tapaka amin'ny dokotera ny soatoavanao momba ny rà, indrindra raha ianao manana tantaram-pianakaviana aretin'ny aretim-po na osteoporose.Raha tsy azonao lazaina izao fa ny sakafo manala ny vondrona sakafo Rex dia tsy ny safidiko voalohany, na dia misy lafiny iray aza ny paleodiet tena azoko resahina, toy ny fampihenana siramamy sy sakafo voahodina - tsy ampy ny porofo mivaingana fa ny fanafoanana ny voamadinika sy ny vokatra vita amin'ny ronono avy amin'ny sakafonareo dia tsara io sakafo io dia natao hanahaka ny razanay, fa ny tena izy dia lavitra be isika hatramin'ny andron'ny lava-bato ary tsy azontsika atao ambanin-javatra ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny sakafo isan-karazany izay mikasika ny vondrona sakafo rehetra
Inona avy ireo vokatra maharitra ateraky ny sakafo paleo?
ela-terme Paleolithic dietdia mifandraika amin'ny fihinanana tsiranoka ambany fanoherana, ny fitambaran'ny microbiota tsinay isan-karazany ary ny fihenan'ny serum TMAO.29 Aogositra 2019
Ka ny Paleo Diet no sakafo manaraka, ary tena miorina amin'ny sakafo izay - rehefa dinihina hoe avy aiza ilay anarana - dia niverina tamin'ny Paleolithic, izay roa tapitrisa sy sasany taona lasa izay, nohanina tamin'izany fotoana izany - ny tiako holazaina dia ny hafa Ny anarana dia sakafon'olona lava-bato, sakafo an-taonan'ny vato, sakafon'ny mpihaza. Ka ilay mpihaza mpihaza ho ahy satria tsy ny olon-drehetra no mahalala tsara izay sakaizan'ny zohy, fa rehefa mieritreritra mpihaza mpihaza ianao? ny hevitrao, ny zavatra latsaka avy amin'ny hazo izay mety ho hitanao any an'ala. Rehefa eo akaikin'ny renirano ianao, eo akaikin'ny rano iray, zavatra azo idirana.
Ka hena mahia, trondro, voankazo, legioma, voanjo ary masomboly. Noho izany dia mametra - amin'ny ankapobeny ny hevitry ny Paleo dia ny sakafo izay nanjary fahita tamin'ny fisian'ny fambolena - ny vokatra vita amin'ny ronono, ny legioma ary ny voan-javatra - dia nanomboka io olana io, raha lazaina, izay nihinana haingana ny sakafo ka tena nahatratra ny vatantsika izy ireo, ka tsy afaka nifanaraka ny vatantsika. Antony mahatonga ny hatavezina, diabeta, aretim-po.
Tsy voatery aho - ny fambolena ihany no ampahany amin'izany, satria eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, ary amin'ny ankamaroan'ny zavatra nohanin'ny olona, ​​dia mihinana sakafo fonosana be dia be isika, ka sakafo voahodina tokoa io ary tsy voatery ho marina. zavatra avy amin'ny toeram-piompiana. Ka ny hevitra fotsiny dia hoe miaraka amin'ny fambolena sy ny legume ary ny voamaina ary ny fanatsarana marina ny voa, dia ataonareo ho sakafo voahodina avokoa ireo zavatra fambolena ireo. Azo antoka fa misy fahiratan-tsaina ao ambadik'izany.
Ka ny sasany amin'ireo fitakiana tombony ho an'ny sakafo paleo, karazan-javatra mitovy amin'izany - mampihena ny lanjany, mitazona lanja salama. Inona no azonao hanina amin'ny sakafo Paleo - tena be dia be izy io, izany hoe voankazo, legioma, voanjo, voamaina, hena mahia, izany hoe indrindra sakafo fihinana ahitra na lalao bibidia.
Trondro - ny trondro omega-3 asidra matavy misy salmon, tuna albacore, trondro matavy makarel izay ao anaty lisitra, mackerel, ary fantatro v Tsy misy olona mihinana an'izany matetika. Fa eo foana io, fa safidy tsara azo eritreretina satria misy ireo fanontaniana hafa rehetra ireo raha toa ka manome soso-kevitra ny salmon ianao, dia ve dia wild, namboly ve izany, sa tsy izany? Izany ve? Noho izany, somary tototry ny ahiahy ny olona hoe avy aiza ny hazandranony ary ny tena tombony azo avy amin'ny toeram-piompiana. Ka ny menaka dia zavatra hafa, vita amin'ny voankazo sy voanjo, ary tsara ny menaka oliva.
Oliva, kennel, menaky ny laonand. Zavatra tokony hialana - Ka ity dia lisitra lehibe tokoa, ary averiko indray, karbaona sy zavatra vita amin'ny ronono izany. Ary toy izany koa ny karazana voam-bary, varimbazaha, oats, ary orza, izay misy gluten daholo; Legume, izany hoe tsaramaso, voanemba, voanjo, voanjo; Vokatra vita amin'ny ronono, izany hoe vokatra vita amin'ny ronono, izany hoe ronono, fromazy, yaorta, ny fianakaviana iray manontolo.
Voadio voadio - Mazava ho azy fa ny mpandoa zohy dia tsy nandany siramamy na sira voadio tao anatiny. Ny ovy dia tsy mitovy ary amin'ny karazan-tsakafo voahodina rehetra indray, noho izany dia tena misy ny olana ara-tsakafo miaraka amin'ny Paleo Diet - misy singa fihinana mahasalama. Be voankazo, legioma ary voanjo no avo; tsy misy voa na legume, ka tena izy rehetra - izay loharanom-vitamina sy mineraly ary fibre tena tsara.
Ary tsy misy vokatra vita amin'ny ronono izay loharano proteinina tena tsara, nefa koa loharanom-kalsioma voajanahary tsara indrindra. Ny kalsioma no mineraly lehibe indrindra ao amin'ny vatana, ary ireo olona izay tsy mihinana vokatra vita amin'ny ronono dia tsy manana fotoana ahazoana kalsioma ampy, na manakaiky izay mety ilainy aza ao anatin'ny iray andro. - Very sy / na mitazona lanja.
Misy ny sasany mety ho vokatry ny fahasalamana mahasoa hafa, fa tsy misy fandalinana klinika maharitra intsony. Ary ny ankabeazany dia anecdotal. Ny ankamaroan'ny olona mahalala olona nanao an'io ary miresaka momba izany ianao mandritra ny fotoana fohy.
Ary mieritreritra ry zareo, oh, hanomboka aho. Raha manao an'izany ianao dia hanomboka ny olona ary mety hahita fahombiazana na tsia.
Azo antoka maharitra ve i Paleo?
nypaleony fihinanana sakafo dia mety hanampy anao hihena na hihazona ny lanjanao. Mety hisy vokany mahasalama hafa koa. Na izany aza, tsy misyela-tenyfandinihana klinika momba ny tombony sy ny loza mety hitranga amin'ny sakafo.
Sakafo ihany no sakafonay, ka tsy misy voa, tsy legioma, tsy misy voankazo, tsy misy fibre. Ny soritr'aretina autoimmune sisa tavela izay hitanay dia namboarina. Mpisakafo ara-pahasalamana eken'ny federasiona aho.
Asehoy ahy ny fanadihadiana fa mampidi-doza ho an'ny lupus ny broccoli! Ka tamin'ny 1930 dia fanadihadiana iray maharitra herintaona no navoaka izay nijery olona roa nihinana sakafo nofinofy. Ary nandritra izany fotoana izany, ireo olona ireo dia tsy niaina vokatra ratsy. Fianarana maharitra herintaona hatramin'ny 1930.
Avy amin'ny olona roa. Misy fanadihadiana an'arivony sy an'arivony manaporofo ny tombony azo avy. Avy amin'ny voankazo, legioma.
Ity ny zavatra mahafinaritra, afaka mihinana mazava tsara ny olona ary salama. Misy ny olona izay
Tsy misy afa-tsy zavamaniry, marina. Misy ny olona tsy mihinana afa-tsy ny biby - vokany lehibe eo amin'ny fahasalamana. Ary tsy haiko na iza na iza eto milaza fa sakafo mifototra amin'ny zavamaniry no lalana tokony haleha.
Fa ny soso-kevitro dia misy aretoxins amin'ny zavamaniry izay tsy ilaintsika. Ny zavatra ao anaty zavamaniry ary tsy misy fanadihadiana mampiseho fa manimba ny olombelona ny hena. Dokotera Khan, tohizo.
Te hilaza fotsiny aho fa indrisy fa 10 ka hatramin'ny 20 taona vao tena tsaraintsika izany. Raha tena misy ny fandinihana olona mihoatra ny roa amin'ny taona 1930, dia ahiana ny homamiadana sy aretim-po. Ireo dia dingana mitombo miadana, ary izany dia herinandro fandalinana mikraoba, herintaona ao amin'ny laboratoara ara-pitsaboana tamin'ny taona 1930 raha nanao izany.
Tsy fantatr'izy ireo hoe inona ny proteinina C-reactive marefo. Tsy misy dikany ve izany, saingy tsy nahatratra izy ireo, ary fantatro fa fantatry ny rehetra izany. Ny Ivotoeram-pirenena misahana ny fahasalamana dia nanome ny $ 12 tapitrisa dolara an'ny Cleveland Clinic hanadihady ny vokatry ny hena amin'ny TMAO sy ny microbiome satria misy fanadihadiana 1.000 izay manisy ratsy, ary izaho dia manam-pahaizana manerantany momba ny TMAO Doctor Saladino, don avelao aho hanao izany.
Tsy ho faly ianao. Tsy ho tsara fanahy aho. Andraso 10, 20 taona alohan'ny hilalaovana amin'ny sakafo mampidi-doza, ny antony maha-mampidi-doza ity rehefa manjary jamban'ny olona ny fandaharam-potoanany manokana ka manomboka manaratsy ny zavatra hafa rehetra.
Eny, tsy manao an'izany aho. Dokotera vegan i Doctor Khan, okay, tsy izany aho, ary raha dokotera Khan, raha hiteny izy izao fa izay mihinana vokatra biby dia mampidi-doza amin'ny fahasalamany mandritra ny androm-piainany. Hoy aho hoe, Doctor Khan, diso ianao.
Tsy miteny aho, raha ny hevitro, heveriko fa misy olona any izay mampiditra hena amin'ny sakafon'izy ireo. Ary tena mandeha tsara io. Saingy tsy afaka mipetraka eto ianao ary milaza ny tsara indrindra, toa ny olona rehetra ao amin'ity efitrano ity no manala ny voankazo, legioma, voanjo ary masomboly amin'ny sakafony. (Mihomehy ny mpanatrika)) Ie.
Tsy afaka hipetraka eto ianao ary hijery ny masoko ary hilaza amiko fa manana angon-drakitra maneho izahay fa mety tsy hanimba ny fahasalamantsika ankapobeny amin'ny fotoana maharitra. Ny lazaiko dia tsy hoe tokony hesorintsika tsy hohanina ny zava-maniry rehetra. Misaotra, misaotra, misaotra.
Ny lazaiko dia ny hitondrako azy. Misarika ny sainao ho amin'ny zava-misy aho fa ny voankazo sy legioma dia misy zavatra mety hanimba ny olombelona, ​​ary amin'ny tranga izay tsy dia mihatsara ny olona dia tokony hoheverintsika ny sakafon'ny karnavora izay manilika an'io ho safidy azo antoka satria tsy misy fatiantoka ny fihinanana. hena ihany. Avereno any amin'i Sarah sy Ashley, satria zava-dehibe izany.
Efa nanandrana ny sakafo mety rehetra ary, ary tsy nandaitra taminao izany ary tao anatin'ny fotoana fohy dia manandrana zavatra toa izao ianao, iza aho no hitsara azy ireo. Manana izy ireo, salama tsara, saingy mbola eo amin'ny faha-20 taonanao ianao ary mila mieritreritra ny fahasalamanao maharitra. Ka hanoro anao aho ke ep ataovy izay ataon'ny lehibe anao raha izany no tianao hatao.
Aza mihaino olona milaza aminao anefa fa ny voankazo, legioma, voanjo, voa, voanjo, voamadinika dia mahatsiravina ho anao ary mety hanimba ny fahasalamanao izany. Tsy hainao fotsiny. Heveriko fa rariny ny milaza, toa ny nolazainao ihany, misy olona mankafy ny tsy fihinanana hena.
Midika izany fa tsara ho azy ireo izany, ny olona sasany dia afaka mahazo tombony amin'ny fihinanana ny vokatra biby rehetra, izay nilaza fa afaka mahazo ny otrikaina ilaintsika amin'ny olombelona isika amin'ny alàlan'ny fihinanana ireo izay mamadika ny fomba fiompy. Eny, ary manana ny asan'ny ra isika hanohanana izany, talohan'ny nandehanantsika tamin'io lalana io dia nihinana sakafo mifototra amin'ny zavamaniry avo dia avo izahay ary nahazo asan'ny rà, takelaka misy otrikaina izay naneho ny tsy fahampiana ara-tsakafo mafy. Fantatrao izay mahaliana, Sarah sy Ashley, rehefa maheno ny tantaranao aho.
Mazava fa mieritreritra aho fa ny fomba fihinananao izao dia mety ho salama kokoa noho ny Sakafo Amerikanina mahazatra, ary heveriko fa zava-dehibe izany ao an-tsaina raha very ny tenanao, mieritrereta tsara amin'ny Standard American Diet. Tsy mavesatra fotsiny amin'ny hena voahodina, sakafo voadio ary gliosida voahodina. Izany no antony nahitantsika ny fitomboan'ny hatavezina.
Paleo ve ny akondro?
Sakafo hohanina amin'nyPaleolevitra
Safidio ny wild-tratra raha vitanao. Atody: safidio atody manan-karena, kijana na omega-3 manan-karena. Legioma: Broccoli, kale, peppers, tongolo, karaoty, voatabia, sns. Voankazo: paoma,akondro, voasary, poars, zavokà, frezy, manga ary maro hafa.
Manampy anao bebe kokoa ve i Paleo?
Ny poidinaomety ho tsara kokoa.
“Eo amin'nypaleosakafo,ianareoreBebe kokoamety hanana fihetsiketsehana tsinay ara-dalàna sy mahasalama. Izany dia satriaianareomitombonyfihinanana legioma, izay midikaianareoManampy ny habetsaky ny fibre ao koa izy ireonysakafo », hoy i Dr.13 nov 2017 Novambra
Iza no keto mahasalama kokoa na Paleo?
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​nypaleosafidy tsara kokoa ny sakafo ara-tsakafo satria manovaova kokoa ny safidin'ny sakafo noho nyIRETO, izay manamora ny fihazonana maharitra. Amin'ny faran'ny andro, ny sakafo mety ho anao mandritra ny fotoana maharitra no safidy tsara indrindra.
Afaka mihena ve ianao amin'ny Paleo?
Famintinana: ApaleolevitraafakaVonjeovery lanja ianaosatria be proteinina izy io, ambany karbetra sy famenoana mahatalanjona. Izy io koa dia manafoana ireo sakafo voadio be sy nasiana siramamy.21 Jona. 2017 Novambra
Mandra-pahoviana no tokony hijanonanao amin'ny sakafo paleo?
Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2015 tao amin'ny Journal of the American College of Cardiology dia nahatsikaritra fa olona 76 izay manaraka nySakafo Paleonandritra ny 60 andro (ary koa ireo izay nanaraka ny drafitra vegan, Mediteraneana ary DASH mandritra ny fotoana lava) dia very salan'isa 9 pounds ary nanatsara ny haavon'ny tosidra.
Manala lanja anao ve i Paleo?
Famintinana: Apaleolevitraafaka manampy anao hihenasatria be proteinina izy io, ambany karbetra sy famenoana mahatalanjona. Izy io koa dia manafoana ireo sakafo voadio be sy nasiana siramamy.21 Jona. 2017 Novambra
Ahoana no hanarahana?
Misy vokany ratsy amin'ny fihinanana paleo ve?
Ny gripa ambany-karbaona dia iray amin'ny voka-dratsin'ny fihinanana paleo matetika. Ny soritr'aretina dia mety ahitana aretin'andoha, havizanana, fahalemena, fisainana manjavozavo (zavona amin'ny ati-doha) ary fahasosorana, izay mety vokatry ny fihenan'ny fihinanana gliosida.